> Resource > Video > Sida loo dar Music (Music Background) si ay u Video
Users Computer oo da 'walba, danaha iyo heerka xirfada laga yaabaa waxtar ka hela inay ku gartaan si loo dar music music / jeeda in video ah. In this article, waxaad ku baran doonaa sida loo sameeyo codsiga video tafatirka feature-hodan ah: Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ).
Tani qalab tafatirka xirfadeed ka dhigaysa in ay si dhib ah dhibaato ku darto asalkaaga music jecel yahay ama track audio in videos (saareen dhawaaqa hore ay sidoo kale suurto gal ah). Ka sokow, aad jar karaa dhererka, qabsato xawaaraha ciyaareed, volumn, garoonka, ku dar ka baxeysa ee / libdhi soo baxay si ay u kaamil ah oo aad u video. Just raacaan hoos ku tallaabo hagitaan talaabo talaabo ay ku darto audio ama music aad video fudayd.
Fiiro gaar ah : Hoos hage qaadataa shaashada Windows si ay u sharxaan sida ay ku darto music si maqal ah. Si aad ku dari audio in video on Mac wuxuu kaloo u shaqeeya isku mid.
1 dejinta asalka videos
Guji "Import" doorasho si shuban faylasha video ka your computer disk adag tahay in album User ee. Haddii kale, si fudud u jiidi oo hoos u kuwan video ka your computer si uu furmo suuqa hoose. Oo dhammu waxay ku daray video clips lagu soo bandhigi doonaa in ay leeg- warbaahinta bidix. Ogsoonow in aad weli ku dari kartaa files images haddii loo baahdo.
2 dar music jeeda in video
Jiid ah laga keeno video files ka album ay u Video Timeline ka mid mid. Hubi in ay sida ay u si cayaarta oo aan is dul saaran. Markaas jiidi oo hoos u files music ee Jadwalka Music ah. Hadda waxaad u jar karo iyo qabsato booska ku haboon ee aad dhererka video. Marka aad dhigay booska, aad awoodo jeeg-waqtiga dhabta ah ee suuqa kala previewing oo hufay.
Faalladaada talooyin audio : Double guji file music in ay arbushin ilaa guddiga tafatirka audio. Halkan, waxaad samayn kartaa itusi dheeraad ah oo maqal ah sida / hoos xawaaraha xawaaraha kor, qabsato mugga, ka baxeysa dhigay libdhi soo baxay, habayn garoonka / ah, iwm
Ka saar video music : Haddii aad rabto in aad music daray badalo files audio asalka ah, waxaad u baahan tahay in la muujiyo video ah, xaq waxa guji dooro "Audio jari lahaayeen". Markaasay aad track audio asalka si toos ah oo muujinaya doonaa Music Timeline ah. Si aad u soo saarto, kaliya ku dhacay "Delete" ee keyboard ah. Haddaba meel u dhigma in Music Timeline aad jiidi kartaa file maqal ah diirada u saaran.
3 dhoofinta aad video la file music
Marka aad ku qanacsanayn natiijada, ku dhacay "Abuur" inay u dhoofiyaan aad video. Daaqadda pop-up muuqata ka, doortaan si loo badbaadiyo qaab file aad jeceshahay wax.
Ka sokow dhoofinta video on your computer, waxaad sidoo kale abuuri kartaa video qalabka sida iPhone, iPad, Zune, si toos ah video geliyaan si ay u YouTube, ama u gubato si DVD u ciyaaro on TV. Dhammaan waxaa lagu gaari karaa oo dhan-in-mid video editor, software dheeraad ah looma baahna.
Qaabab ay taageerayaan Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Tani xirfad software video tafatirka taageertaa ku dhawaad ​​kasta video maqal iyo qaabab. Sidaas waxaad ka heli doontaa waxa aad u haboon in lagu daro file music video in aan diinta dheeraad ah iyo allabari oo tayo leh.
Video qaabab : MOV, Mpg, MPEG, MP4, wmv, AVI, FLV, MKV, M4V, DV, H264, 3GP, VOB, adag, lowska, H261, NSV, DAT, EVO, dhexena, RMVB, TS, DVR-MS , TP, TRP, M2TS, ASF
Qaabab Audio : MP3, AAC, regelingen, AC3, MKA, M4V, M4A, FLAC, daanyeer, AIF, AIFF, daanyeer, CUE, AU, Amr, OGG, DPE, MPA, MP2, RA, WMA
Photo qaabab : JPG, jpeg, PNG, BMP, JPE, TIFF, GIF, DIB, JFIF, TIF